नेपाली चेलीलाई अपमान गरेको भन्दै , भारतीय विरुद्ध उत्रिए नायिकाहरु – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपाली चेलीलाई अपमान गरेको भन्दै , भारतीय विरुद्ध उत्रिए नायिकाहरु
‘पातल लोक’ नामक भारतिय सिरियलमा नेपाली महिलाको अस्मिता माथि प्रयोग भएको निच शब्दप्रति नेपाली नायिकाहरुले बिरोध जनाएका छन । रेखा थापा, करिश्मा मानन्धर, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा, सरिता लामिछानेले पनि यसको बिरोध गरेकी छन् । छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल नामक अभियानकी अभियान्ता समेत रहेकी रेखाले यस सिरियलको निर्माण युटिनलाई तत्काल माफी माग्दै रेकर्डबाट समेत उक्त दृश्य हटाउन माग गरेकी छिन् । यस्तो छ रेखाको बिरोध सहितको स्टाटस :
‘एकातिर जमिन अतिक्रमण गरेर हाम्रो सर्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने, भएन भनेर बलिउडका फिल्म र सिरियलमा नेपालीको मान मर्दन हुने गरेर प्रस्तुत गर्ने दादागिरीको घोर भत्र्सना गर्दछु । पातल लोक नामक सिरियलमा नेपाली महिलाको अस्मिता र हाम्रो सार्वभौम देशको स्वाभिमानी छोरी हरुलाई जुन निच शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यो घोर आपत्ति जनक छ । त्यती मात्र होइन यस्तो भाषा र हेपाह प्रवृतीले बलिउडका फिल्म, कला साहित्यको नारी प्रतिको असहिष्णुता र सोचको स्तर पनि देखाएको छ । यसको निर्माण सम्बद्ध पक्षले तुरुन्तै माफी मागोस् र रेकर्डबाट हटाइयोस् । कुन देशका छोरी बहादुर छन भन्ने ईतिहास साक्षी छ, हामीले कुनै सिरियल वा कठपुतली बनेर फिल्म खेल्नेसँग सिक्नु छैन । यता नेपालमा भारतीय सिनेमाको दलाली गर्ने, लाइन लागेर हेर्ने र घर घर मा हिन्दी सिरियल हेर्ने भिड पनि होसमा आओस् ।’
केकि अधिकारी :
फेसुबकमा स्टाटस लेख्दै केकीले पनि नेपाली चेलीलाई गाली गर्न नेपालीहरुबाटै सिकेको उल्लेख गरेकी छिन् । पढ्नुस् नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस, ‘भो छोडदिनुस्, आफ्नाले भन्न छाडेका छन् र अरुले नभनुन् ? आज अरुले आफ्ना चेलीबेटीलाई देशकै नाम लिएर तुच्छ गाली गर्दा सार्है चित्त दुख्यो ? मन पोल्यो ? रगत उम्लेर आयो ? आफ्नै भनाउँदाहरुबाट यस्ता गालीहरु मुख अगाडी, मुख पछाडी, सामाजिक सञ्जालमा, युटुवमा वालछ्याल्ती नसुनेका, नदेखेका हौं र ?
हो, हामीबाटै सिकेका हुन् । यिनिहरुलाई भन्न मिल्ने रहेछ भनेर हामीले नै उकासेका हौँ । छातीमा हात राखेर भन्नुस् त हामीले आफ्नै देशका दिदीबहिनीलाई यस किसिमका अपहेलना कति गरेका छौ ? अनि हामी यो आशा गरिरहेका छौँ कि अरु चाहिं बदलिउन् । तर आफूलाई त जति पनि अधिकार छ महिलाको चरीत्र हत्या गर्ने ? हैन ?’ उता जे भयो, जसरी उनीहरुले हामीलाई बुझे त्यो कदापि माफी योग्य छैन् । तर के हामी ठीक छौँ ? एकपटक आफूले आफूलाई निसंकोच नियाल्ने कि ? ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले पनि ‘पातल लोक’ नामक भारतिय सिरियलमा नेपाली महिलाको अस्मिता माथि प्रयोग भएको गालीप्रति आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छिन् । नेपाली चेलीलाई गरिएको भद्धा गालीप्रति करिश्माले भत्र्सना गरेकी छिन् । करिश्मा मानन्धरले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ, ‘हदै सम्मको तल्लो स्तरिय शब्द प्रयोग गरेर नेपालीहरुप्रती गरिएको यो हदैसम्मको हेपाइ प्रस्तुत गरेको सो सिरियल कला प्रस्तुतिको नाममा भद्दा उपहास हो, यस्को घोर भत्र्सना गर्दछु ।
हरेक मुलुकका आमा, छोरी, बुहारी या कुनै पनि महिला जननी हुन्, के त्यो नेपाल आमा, अमेरिकी आमा, चाइनिज आमा या अन्य देशका आमा हुन्छ ? आमा सिर्फ आमा हुन्छिन् । कुनै महिलाको हैसियतलाई तल गिराउँदा कुनै मुलुकको नाम जोडेर गालि गर्नु भन्दा पहिला तिनले आफ्नो हैसियत के हो भनेर आफैसंग प्रश्न गर्नुपर्ने !’
सरिता लामिछाने :
यस्तै नायिका रेखा थापा, केकि अधिकारी, करिष्मा मानन्धर संगै कलाकार सरिता लामिछाने पनि यस बिषयमा आफ्नो मत फेसबुक मार्फत जाहेर गरेकी छन् । दर्जनौं नेपाली टेलिफिल्ममा अभिनय गरेकी सरिता लामिछानले आफ्नो फेसबुकमा लेख्छिन्, “स्वाभिमानी नेपालीहरुको अस्तित्व माथि प्रहार गरिएका यि र यस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गरी सम्बन्धित निकायले माफी मागोस् ।” सरिताले मुक्ति, परिचय जस्ता टेलिफिल्ममा जीवन्त अभिनय गरेकी छिन् ।
नायिका ऋचा शर्माले पनि यसमा आपत्ती जनाएकी छिन् । तर नेपाली महिला कलाकारलाई प्रयोग हुने अपशब्द माथि बिरोध नभएको ऋचाले दुःख व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्छिन, ‘अमेजन प्राइमको ’पाताल लोक’ सिरिजमा नेपाली महिलालाई लिएर जुन अपशब्द प्रयोग भयो, त्यसले सम्पूर्ण नेपालीको मन दुखेको छ ।
फिल्मको निर्माण पक्षले नेपालीहरूसँग माफी माग्नुपर्छ र त्यो शब्द सिरिजबाट हटाउनुपर्छ । यस्तो बेलामा हामी सबै एक भएका छौं । तर, यस्तो एकता नेपाली कलाकार, मोडल, मिस नेपालहरूलाई ’रन्डी’, ’भालु’ भनेर आउने टिप्पणीको विरोधमा कहिल्यै देखिन्न । त्यो टिप्पणी व्यक्ति विशेषलाई आएको भएर कसैले चासो नदेखाउनु भएको होला शायद । त्यस्ता अपशब्द बोल्नेहरूलाई पाठ सिकाउनु पर्दैन हामीले ?